Uchwepheshe we-Semalt Uchaza izinhlobo ezingu-12 zamaZwe we-WordPress ongawadala kalula
I-WordPress cishe iyisayithi elinamandla kakhulu lokubhuloga kanye nokuphathwa kokuqukethwe okukhona embonini yokuthengisa namuhla. Eminyakeni embalwa edlule, i-WordPress yaqala ukuthola ukuthandwa njengethuluzi elifinyeleleka kakhulu elizoyisebenzisa uma kuziwa ekudaleni amabhulogi. Njengamanje, i-WordPress isetshenziselwa amashumi ezinkulungwane zabathuthukisi kanye nabathengi bokuqukethwe ukuze benze amawebhusayithi avela kumasayithi asebenzayo kuya kubhulogi bomuntu siqu.
Namuhla, izitolo zezindaba, amabhulogi adumile, kanye namawebhusayithi omculo zisebenzisa i-WordPress ukushaya imakethe yabo ehlose ngesikhathi. Embonini yokuthengisa, izingosi ze-WordPress zibalwa njengendlela engcono kakhulu.
U-Oliver King, onguchwepheshe ophezulu Semalt , unikeza uhlu lwezinhlobo ezingu-12 zamawebhusayithi ongazisebenzisa kalula usebenzisa i-WordPress.
1. Iwebhusayithi ye-E-commerce
I-WordPress iqukethe amapulagi aphelele nezindikimba eziphezulu ukudala iwebhusayithi ewusizo ye-e-commerce. Iwebhusayithi ye-E-commerce eyenziwe nge-WordPress iqukethe izici ezibucayi ezivumela abathengisi ukuba baphathe okusungulwa bese bengeza izinqola zokuthenga. Izingosi ze-WordPress nazo zenza kube lula ukuthumela nokuthola izinkokhelo ngokusebenzisa amasayithi.
2. Amaforamu ebhizinisi
Ingabe usebenza ekwakheni isiqondisi sebhizinisi? I-WordPress iyithuluzi elihle kakhulu kuwe. Sebenzisa ngokunenzuzo iZwiPress ukwakha iwebhusayithi yezitayela zebhizinisi futhi uthole ithuba lokungeza imininingwane yebhizinisi lakho nokuxhumanisa izixhumanisi kuwebhusayithi yakho. Izingosi ze-WordPress zivumela izivakashi ukuba zifune ngamabhizinisi amaningi.
3. Iwebhusayithi yesitayela se-Wiki
Phatha kahle okuqukethwe kwakho ngokudala iwebhusayithi yakho usebenzisa i-WordPress. Eyaziwa ngokuthi amawebhusayithi e-knowledgebase, amawebhsayithi e-wiki adinga ukuxhumana kwangaphakathi kumadokhumenti atholakalayo nokuthunyelwe. I-WordPress inikeza izazi ithuba lokuhlukanisa okuqukethwe ngokusebenzisa amathegi kanye nezigaba.
4. Imiphakathi esekelwe ku-intanethi
Sebenzisa i-WordPress ukwakha umphakathi wakho we-intanethi ngokususelwa esihlokweni owazi kahle ngaso. Thola ithuba lokuhlanganyela okuqukethwe kwakho nezivakashi. Sebenzisa uhlu lwabavakashi ukudala uhlu lwama-imeyili abanike amazwana kokuqukethwe kwakho..Amasayithi e-WordPress avumela izivakashi ukuba zibeke amazwana kusayithi lakho lomphakathi kalula.
5. Amawebhusayithi e-Academic
Sebenzisa i-WordPress ukudala iwebhusayithi yezemfundo futhi uthole ithuba lokufaka izinsiza ezihlobene namakhono ahlukene. Nikeza othisha nabafundi ngemininingwane yokungena ngemvume ukuze bakwazi ukulawula kalula futhi bafake okuqukethwe okuwusizo kusayithi lakho.
6. Iwebhusayithi yokumaketha yokubambisana
Amawebhusayithi okukhangisa okubambisana ayaziwa kakhulu njengamawebhusayithi axhumano we-niche. Ngokudala amawebhusayithi ahlangene we-niche usebenzisa iZwiPress, ungathola ama-dollar engeziwe ngokushayela ithrafikhi yangempela kwisayithi lakho. Inombolo eningi yezivakashi ingaqeda ukuthenga imikhiqizo exoxwa ekuthunyelwe kwakho.
7. Iwebhusayithi yesitayela se-Portfolio
Vumela imikhiqizo yakho, ukuklama, nobuciko kukukhulume. Izingosi ze-WordPress zihlanganisa izindikimba nezici ezinikeza abaculi ithuba lokubonisa amandla abo kuzivakashi.
8. Ibhodi lomsebenzi womphakathi
Sebenzisa i-WordPress ukudala ibhodi lomsebenzi eku-intanethi lapho amakhasimende angathumela futhi athole imisebenzi kalula. Izingosi ze-WordPress kulula ukuphatha nokuzijwayeza.
9. Iwebhusayithi esekelwe ezithombeni
Yakha iwebhusayithi yezithombe usebenzisa i-WordPress ukujabulela izingqikithi ze-Wiral ne-Pingraphy kusayithi lakho. Layisha izithombe kukhasi lakho eliyisiqalo ngaphandle kokuhlangabezana neziphambeko zobuchwepheshe.
10. Ibhizinisi lebhizinisi
Khetha ezihlokweni ezihlukahlukene ze-WordPress site bese uphatha isakhiwo ukuze uhambisane nemininingwane yakho yebhizinisi.
I-WordPress idlala indima ebalulekile ekuphumeleleni kwewebhusayithi yebhulogi. Izingosi ze-WordPress zingathuthukiswa yilowo nalowo ofuna ukuthola iwebhusayithi.
12. Izindaba ze-News and Magazine
Ukwenze abafundi kubavakashi kanye namakhasimende angakghona ukuthola okuqukethwe kwakho yilokho okubalulekile uma udala iwebhusayithi nezindaba zomagazini. Izingosi ze-WordPress zinikeza izintatheli ithuba lokushicilela izindaba eziphezulu.
I-WordPress yiyona ndlela engcono kakhulu yabathengisi nezintatheli ezisebenza ngokushayela imoto kumawebhusayithi abo. I-WordPress inezindikimba ezanele, ama-plugin, nezigaba ongakhetha kuzo. Uma usebenza ekwakheni iwebhusayithi, i-WordPress iyindlela engcono kakhulu ongayicabangela.